LG-E612 အား Root ဖောက်၍ မြန်မာဖောင့်ထည့်ခြင်းး ~ mgkhainghtoo
ကျွှန်တော်သတိထားမိတယ်..ဆိုဒ်တွေတော်တော်များများမှာ Huawei , Samsung , HTC , Sony Ericsson တွေကို Root ဖောက် Myanmar Font ထည့်ဒီလောက်ပါပဲ..
LG တွေကို မရှိသလောက်ရှားပါးနေကြတယ်..ကျွှန်တော်လည်း ပါတ်မွှေ ရင်းနဲ့ …LG-E612 ကို Root ဖောက်၍ မြန်မာဖောင့်ရမိသွားပါတယ်ဆိုပါတော့
Root လုပ်ဖို့ အတွက် Root Tool ဒီမှာဒေါင်းလော့ ယူလိုတ်ပါ ။
ဒီကောင်လေးကတော့ဖုန်းထဲမှာ Install ယူလိုတ်ပါခင်ဗျ SystemBackupTest.apk
အဲဒီ SystemBackupTest က Zip ဖိုင်လေးပါ..အဲဒါကို Rename ပြောင်းလိုတ်ပါ..ပြောင်းရမယ့်အမည်က SystemBackupTest.apk ဆိုပီးတော့ပြောင်းလိုတ်ပါ..
ဖုန်းမှာ Options -> Security” enable “Unknown sources ကို On လုပ်ပေးထားပါ
SystemBackupTest.apk လေးထဲကိုဝင်လိုတ်ပါ..အဲဒီအခါသူက Holly Wood ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်နေပါတယ်..
အဲဒီအခါ ဖုန်းရဲ့ ပါဝါခလုတ်ကိုဖိထားလိုတ်ရင်..Power , Restarr , Airplane Mode ဆိုတဲ့သုံးခုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်
အဲဒီအခါ Restar ကိုရွေးပေးလိုတ်ပါ..
ပြီးရင်ဖုန်းက Restart ကျပြီးလို ပါဝါပြန်တက်လာပါမယ်..ပါဝါပြန်တက်လာတဲ့အချိန် ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ PC မှာ ဆက်သွယ်လိုတ်ပါ
ဖုန်းမှာက Charg Only ကိုရွေးပေးပါ
ပြီးရင် Root Tool လေးကို ဇစ်ဖြည်လိုတ်ပါ။ အဲဒီဇစ်ဖြည်လိုတ်တဲ့အထဲမှာ root.bat ဆိုတလေးကို Enter လေးတချပ်နှိပ်လိုတ်ပါ..ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးနော်..
သူ့ ဘာသူအလိုလို လုပ်သွားရင်းနဲ့ပဲ ဖုန်းဟာ Reboot ကျသွားမှာပါ..ပါဝါပြန်တက်လာရင်ကြည့်လိုတ်ပါ..အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Super Su ဆိုတာလေးတွေ့မှာပါ
အဲဒါဆိုရင်တော့ Root ပေါက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်.
ဟုတ်ကဲ့နောက်တဆင့်အနေနဲ့မြန်မာဖောင့်ထည့်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်.
အဲဒါကတော့ အဆင်ပြေမှာပါ..အဆင်ပြေရာ MMFont Changer
တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ Sony ဖုန်းများအတွက် ဖောင့်ပြောင်းရန် ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုတ်ပါ..ဒါဆိုအိုကေပါပြီခင်ဗျ
(ကျွှန်တော် ဒီမှာပေးထားတဲ့ Root Tool လင့်က ဒေါင်းလော့ယူလို့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးးးအဲဒီအတွက်လည်းမပူပါနဲ့ခင်ဗျ..အဲဒီ Root Tool လင့်ကို mr.chateauman@gmail.com (သို့ ) ကျွှန်တော့တို COA ရဲ့ ဂရုမှာ အဲဒီလင့်ကို ဒေါင်းလော့ယူ၍ ရအောင်ပြုလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ တောင်းဆိုလိုတ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွှန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းပေးပါ့မယ် ။ အဲဒီလင့်က Premium Account နဲ့ဆွဲရင်အဆင်ပြေပါတယ်..ကျွှန်တော့မှာအဲဒီအကောင့်ရှီပါတယ်..စာဖက်သူက တောင်းဆိုမှ ကျွှန်တော်လုပ်
ပေးမှာပါ..စာဖက်သူဒေါင်းလော့ယူပြီးမှ ကျွှန်တော်က လင့်ကိုဖျက်ပစ်မှာမို့ပါ.)